Tantara an-tsarimiaina ny fahaizan’ny Cherokee hampifandrindra hatrany ny teknolojia ho azo ampiasaina amin’ny endritsoratra Cherokee · Global Voices teny Malagasy
Tantara an-tsarimiaina ny fahaizan'ny Cherokee hampifandrindra hatrany ny teknolojia ho azo ampiasaina amin'ny endritsoratra Cherokee
Voadika ny 11 Septambra 2015 9:08 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Aymara, русский, Magyar, Français, English, Deutsch, čeština , Português, Català, Italiano, Ελληνικά, বাংলা, Esperanto , English
Nandritra ny famakivakiana ny tantara, raha vao misy ny teknolojiam-pifandraisana vaovao nampidirina tao amin'ny fiarahamonina, dia niantohan'ny vahoaka Cherokee hatrany ny ahafahan'ny teniny voasoratra hahay hifanaraka amin'izany. Hatramin'ny fotoana nanaovana printy sy ny milina fitendrena ireny ka tonga amin'izao teknolojia nomerika ampiasana ny solosaina sy ny finday misaina izao, dia azo nampiasaina manontolo ho amin'izany ny fiteny Cherokee noho ny ezaka nataon'ireo mpiaro sy mpikatroka tsy mahalala reraka tao anatin'izany lalana nodiavina rehetra izany.
Amin'ny mahateny teratany anisan'ny be mpampiasa azy indrindra ao Etazonia azy, dia iresahan'ny mponina ao North Carolina sy Oklahoma ny teny Cherokee, ary miasa ihany koa any amin'ny fanjakana hafa manerana ny firenena. Raha mihamaro amin'izao fotoana izao ny olona afa-manoratra ny teny Cherokee amin'ny alalan'ny vaninteny, izay ny endritsoratra tsirairay dia entina mamaky vaninteny iray, ny fitazonana sy ny fandrisihana olona mpiteny azy bebe kokoa no mbola laharam-pahamehana aloha hatramin'izao fotoana izao. Ny fampiasana ny teknolojia no lalana iray nahafahana nampitombo ny fahalianan'ny olona amin'ny fiteny.
Nisy lahatsary vaovao natao tamin'ny endrika sarimiaina novokarin'ny Sampan-draharaham-panabeazana ny Firenena Cherokee sy ny Programan'ny Teknolojian'ny Fiteny milaza ny tantaran'ny nandraisana sy nampiasana ny teknolojiam-pifandraisana vaovao io namakivaky ny fotoana. Notantarain'ilay fanorolahy Cherokee Sequoyah, izay namorona ny vaninteny Cherokee voalohany tamin'ny 1821, omen'ny lahatsary ny mpijery ny sasantsasany amin'ny famakivakiana lalantsarotra.
Ny Cherokee Nation Language Technology Program [Programan-Teknolojiam-Pitenenana Firenena Cherokee] dia manohana ireo liana amin'ny fampiasana ny teny Cherokee voasoratra izay mifantoka manokana amin'ny teknolojia nomerika. Ny tanjony dia ny hananganana “vahaolana vaovao ho an'ny fiteny Cherokee amin'ny sehatra nomerika vaovao ka ao anatin'izany ny finday misaina, solosaina finday, solosaina am-birao, tablety ary ny tambajotra sosialy.” Hita ao amin'ny tranonkalany ny tahirinkevitra sarobidy toy ny rakitahiry voalahatra araka ny abidia ny teny vaovao hampiasaina amin'ny voambolana mifandraika amin'ny teknolojia, ny endriky ny kitendry sy ny fomba fampidirana ny endritsoratra Cherokee amin'ny kitendry, ary ny endritsoratra.
Mivoatra mandrakariva ny teknolojian'ny fifandraisana, ary raha misy famantarana eo amin'ny tantara, dia mivoatra mifanaraka amin'izany ihany koa ny fiteny Cherokee.